Sidee fuliyayaashu uga faa'iideysan karaan falanqaynta xogta si kor loogu qaado waxqabadka | Martech Zone
Qiimaha hoos u dhaca iyo sii kordheysa ee hababka falanqaynta xogta ayaa u oggolaaday xitaa bilowga cusub iyo ganacsiyada yaryar inaad ku raaxeysato faa'iidooyinka garashada sare iyo fahamka la xoojiyay. Falanqaynta xogta waa aalad awood leh oo awood u leh kor u qaadista waxtarka, hagaajinta xiriirka macaamiisha iyo hubinta in ganacsiyada ay awoodaan inay aqoonsadaan oo ay xalliyaan arrimaha iman kara si fudud. In yar oo laga barto aaladaha ugu dambeeyay iyo hababka gorfaynta waxay xaqiijineysaa in ilaha ugu dambeeyay iyo xalalka ay u dhowdahay in la iska indhatiro.
Qiimaynta iyo Hagaajinta Hawlaha Hawlgalka
Siyaabo badan oo wax ku ool ah oo loo qiimeeyo loona cabbiro dhinacyada muhiimka ah ee hawlgalka iyo qulqulka shaqo ayaa u oggolaan kara ururada inay si baaxad leh u hagaajiyaan waxtarka iyo waxqabadka. Barnaamijka falanqaynta xogta, adeegyada iyo xalalka ayaa bixin kara aragti sare iyo faham ballaaran oo ku saabsan dhammaan dhinacyada hawl maalmeedka.
Awood u lahaanshaha iyo dejinta jaangooyooyinka wax ku oolka ah ama qiimeynta iyo isbarbar dhiga isbeddelada la filayo ka hor hirgelinta waxay abuuri kartaa fursado badan oo horumar iyo turxaan bixin ah. Laga soo bilaabo qiimeynta hoose ilaa warbixinnada waqtiga dhabta ah, falanqaynta ayaa door muhiim ah ka ciyaari kara hubinta waxtarka hawlgalka in la wanaajin karo.
Kordhinta Xiriirka Macaamiisha
Kordhinta macaamiil ballaadhan ama awood u leh inay daboosho baahiyaha macaamiisha jira iyo kuwa soo socda labadaba waa arrimo aysan ganacsatadu awoodin inay qiimo dhimis ku sameeyaan. Waxaa jira siyaabo badan in falanqaynta xogta laga faa'iideysan karo si loo hagaajiyo xiriirka macaamiisha loona kiciyo qanacsanaanta macmiilka. Laga soo bilaabo abuurista faahfaahin faahfaahsan leh ayaa loo isticmaali karaa si sifiican loo sii saadaaliyo baahiyaha noocyada kala duwan ee macaamiisha ilaa awooda lagu falanqeynayo macluumaadka koontada macaamiisha si loo go'aamiyo qaababka asalka u ah dhaqanka, falanqaynta xogta waxay lahaan kartaa heshiis weyn oo la bixiyo. Lahaanshaha faham wanaagsan ee macaamiishooda waxay xaqiijineysaa in ganacsiyada ay awood u yeelan doonaan kobcinta iyo joogteynta xiriirka wanaagsan ee u horseedi kara guul weyn oo waqti dheer ah.
Aqoonsiga Fursadaha Horumarinta
Aragti la'aan ayaa inta badan ka dhigaysa wax aan macquul ahayn in la ogaado arrimaha iyo xaaladaha salka ku haya kuwaas oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan waxqabadka guud. Falanqaynta xogta waxay sahlaysaa in isha lagu hayo dhinacyada kala duwan ee hawlgalka ama in la qiimeeyo waxtarka iyo heerarka waxqabadka waqtiga dhabta ah.
Aqoonsiga wax kasta oo hawlgal ah oo u baahan kara feejignaan ama horumar lagu sameeyo xawaare aad u sarreeya, fudayd iyo saxsanaansho had iyo jeer waa walaac ay tahay inuu muhiimad gaar ah lahaado. Ganacsiyada laga yaabo inay ka cabanayaan arrimo iyo walaac suurtagal ah oo ku guuleystey inay ka baxsadaan ogeysiiska badanaa waxay ogaadaan in hagaajinta waxqabadka ama wax ku oolnimada wax ku oolnimada ay noqon karto dagaal kacsan.
Ka faa’iideysiga Kheyraadka ugu Fiican
Laga soo bilaabo codsiyada softiweerka illaa bixiyeyaasha adeegga saddexaad, raadinta aaladaha ugu dambeeya iyo xulashada ugu fiican ee kheyraadka waxay sahlaysaa in lagu raaxeysto noocyada kala duwan ee faa'iidooyinka lagu suurta geliyey falanqaynta tirakoobka iyo waqtiga dhabta ah. Hoos u dhaca dhibcaha qiimaha ee la xidhiidha farsamooyinka falanqaynta xogta macnaheedu waxa weeye in xitaa ganacsiyada yaryar iyo ururada leh lacagaha xadidan ay awoodi karaan inay helaan oo ay helaan ilaha ay u baahan yihiin.
Hadday raadineyso adeegyada iyo caawimaadda bixiyaha falanqaynta xirfadleyda ah ama shirkaddu awood u leedahay inay bixiso ama adeegsato codsiyada dijitaalka ah si ay u iftiimiso dhinacyada kala duwan ee xulashooyinkooda, ganacsiyada waxay ku fiicnaan lahaayeen inay raadiyaan ilaha iyo xalka ugu fiican.
Isbeddellada Mustaqbalka ee Xogta Weyn
Halkaas iyo tiro kasta oo ka mid ah hadda iyo mustaqbalka isbeddellada in ganacsiyada ay caqli ku ahaan lahaayeen inay isha ku hayaan. Xogta weyn waxay si dhakhso leh u noqoneysaa ilo lagama maarmaan ah, mid ka mid ah ganacsiyada yar ay awoodi karaan inay ka maqnaadaan. Isbedelada warshadaha hadda jira, sida otomaatiga goobta shaqada oo laga yaabo inay bixiso tiro badan oo xog ah iyo macluumaad falanqeyn ah ama agab softiweer ah oo ka dhigaya mid fudud in la soo saaro warbixinno ama la qiimeeyo diiwaanadii la soo dhaafay, waxay ka dhigan tahay in ganacsiyada maanta ay filan karaan inay arkaan in badan oo ka mid ah falanqaynta xogta ee maalmaha soo socda. La socoshada tikniyoolajiyadaha soo ifbaxaya iyo isku dayga ah in wax badan laga barto wixii qalab iyo agab ah ee dhowaan la heli karo waxay siin kartaa ganacsiyada faa'iido dhab ah dadaalkooda si kor loogu qaado waxqabadka.
Tags: Analyticshorumar joogto ahxiriirka macaamiishawaxqabadka fulintafalanqaynta waqtiga dhabta ahtirakoobka
Chris Parsons wuxuu ka qalin jabiyay jaamacada UCLA shahaadada maareynta ganacsiga. Wuxuu aad u jecelyahay ganacsiga wuxuuna u shaqeynayay lataliye ganacsi tobankii sano ee la soo dhaafay. Waqtigiisa firaaqada, wuxuu baaraa isbeddelada ganacsi ee cusub wuxuuna la wadaagayaa hirgelinta ku habboon iyada oo loo marayo baloog iyo la-talin.
Qorshe 4-geesood ah oo loogu beddelayo Macaamiishaada B2B oo loo beddelayo Brand Evangelists